दृष्टिबिहीन भएर पनि मेसेन्जरमा गफ गर्ने र नेटमा पढ्ने ओमप्रकाश « मेचीखबर
दृष्टिबिहीन भएर पनि मेसेन्जरमा गफ गर्ने र नेटमा पढ्ने ओमप्रकाश
२५ असार २०७३, शनिबार ०६:३९
झापा । पेसाले शिक्षक ओमप्रकास बन्जाडे अरु जस्तै फेसबुकमा अनेक भाव र भंगीका फोटो पोस्ट गर्दैनन् । हतपत्ति कसैको फोटोमा लाइक गर्दैनन् । कमेन्ट पनि लेख्दैनन् । गरुन् पनि कसरी ?
दृष्टिविहीन बन्जाडे सूचना लिन र दिनका लागि फेसबुक प्रयोग गर्छन् । फुर्सदका बेला साथीभाइसँग मेसेन्जरबाट संवाद गर्छन् । फेसबुकमा राखिएको लिंक पछ्याउँदै समाचार सुन्छन् । दुनियाँको खबर थाहा पाउँछन् र आफ्नो दृष्टिकोण बनाउँछन् ।
दृष्टिविहीन भएर के भो ? अरुले जस्तै ओमप्रकाशको पनि चल्तीका सामाजिक सञ्जालमा उपस्थिति छ । एन्ड्रोइड मोबाइल चलाउने उनी मोबाइलमार्फत भाइबर र स्काइपमा गफ गर्छन् । युट्युबबाट गीत सुन्छन् ।
सामाजिक सञ्जाल र प्रविधि प्रयोगले उनी अपडेट मात्रै भएका छैनन् ज्ञानको दायर पनि फराकिलो बनाइरहेछन् । भन्छन्, ‘प्रविधिले मान्छेको आत्मविश्वास ह्वात्तै बढाइदिँदो रहेछ ।’
राम्रो शैक्षक पृष्ठभूमि भएका र सहरमा करिअर संघर्ष गरिरहेका अधिकांश दृष्टिविहीन अरुभन्दा कम छैनन् । प्रविधिको सायोगमा उनीहरुले आफूलाई अब्बल तुल्याउने प्रयास त गरिरहेका छन् नै, दृष्टिविहीन कमजोर हुन्छन् भन्ने आम सोचाइलाई परिवर्तन गरिदिएका छन् ।
ओमप्रकाशले आफूले बोक्ने एन्ड्रोइड मोबाइलमा ‘टक ब्याक’ एप्लिकेशन अन गरेका छन् । जसले गर्दा उनले स्क्रिनमा जहाँ छुन्छन्, त्यहाँ के फङ्सन छ वा के लेखिएको छ भनेर एप्लिकेसनले पढेर सुनाइदिन्छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।